ကြားသိရသမျှ Archives - Khitthit Myanmar
January 22, 2020 KhitthitMyanmar 0
လိမ္မာသီးသည် အဘကို အလှူငွေများသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည် အလှူရှင်များ စုစုပေါင်း ၂၀၀ဦးရေမှ ငွေကျပ် ၃၆သိန်းကိုး လက်ခံရရှိပါသည် အလှူရှင်များ အားလုံးကိုးစားသွားရောက် လှူဒါန်းခွင့်ရရလို့ ထပ်တူတူမျှ ပျော်ရွှင်ရပါသည် နောင်အခါ ကြုံကြိုက်ခဲ့ရင်လျှင် ယခုလို ကုသိုလ်တွေ အားလုံး ယူကြရအောင်ဗျာ အလှူရှင်တစ်ယောက်ချင်းဆီကိုး အဘကိုယ်စား ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် […]
အဘိုးကို​တွေ့တာနဲ့ အဘိုးကိုဖက်​ကာ ငိုခဲ့တဲ့ ဆိုင်​နွန်​ အခု ဆိုင်​နွန်​က လိ​မ္မော်​သီးသည်​ အဘိုးအိုဆီ ကိုယ်​တိုင်​အ​ရောက်​သွားကာ ​ငွေ​ကြေးအပြင်​ လက်​​ဆောင်​​တွေနှင့်​ မုန့်​​တွေကိုပါသွား​ရောက်​လှူဒါန်းရင်း ​တွေ့ဆုံစကား​ပြော​နေတာဖြစ်​ပါတယ်​။ #Sinon #Akonthicelebrity အဘိုးကို​တှတေ့ာနဲ့ အဘိုးကိုဖကျ​ကာ ငိုခဲ့တဲ့ ဆိုငျ​နှနျ​ အခု ဆိုငျ​နှနျ​က လိ​မ်မျော​သီးသညျ​ အဘိုးအိုဆီ ကိုယျ​တိုငျ​အ​ရောကျ​သှားကာ ​ငှေ​ကွေးအပွငျ​ […]
လူကုန်ကူးခံရတဲ့ မိန်းကလေးမှ ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတစ်ချို့ ပြောပြ ဇန်နဝါရီ(၂၃) AlinnMyay(အလင်းမြေ) တရုတ်ပြည်မှာ လူကုန်ကူးခံရတဲ့ မင်းကွန်းတိုက်နယ်က မိန်းကလေးမှ သူမကြုံတွေ့ခဲ့ရမှုတစ်ချို့ကိုပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း မင်ကွန်းတိုက်နယ် ကင်းကျေးရွာက (၁၄) နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့က လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် ပြန့်နှံ့လာတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကိုတွေ့ရှိရာမှ […]
ကြက်သီးထဖွယ် ဝမ်းသာကြီုဆိုမှု နှင့် လူကုန်ကူးခံရတဲ့ မင်းကွန်းက မိန်းကလေး အိမ်ပြန်ခရီး
လူကုန်ကူးခံရတဲ့ မိန်းကလေး ကယ်တင်ပြီး မိဘများထံ အပ်နှံ ဒေသခံ ဆွေမျိုးများ ဝမ်းပမ်းတသာကြိုဆို ဇန်နဝါရီ(၂၁) AlinnMyay(အလင်းမြေ) တရုတ်နိုင်ငံကို လူကုန်ကူးခံရတဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း မင်ကွန်းတိုက်နယ် ကင်းကျေးရွာက (၁၄) နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့က လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာန […]
တနကေ့ ဗိုလျခြုပျစြေးမှာ ဖွဈခဲ့တဲ့ စညျပငျ နဲ့ စြေးသညျအဘ အကွောငျး
January 21, 2020 KhitthitMyanmar 0
တနေ့က ဗိုိလ်ချုပ်ဈေးမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စည်ပင် နဲ့ ဈေးသည်အဘ အကြောင်း တနေ့က ဗိုိလ်ချုပ်ဈေးမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စည်းကမ်းမဲ့ ဈေးသည်အဘ နဲ့ စည်ပင် အကြောင်း မနေ့ညက အဲ့ဒီအဘပိုစ့်လေးကိုတွေ့တာ ကြောင့် ကျွန်တော်အသည်းအသန်အဘကို လိုက်ရှာခဲ့ပါတယ် ည 12 နာရီမှာ အဘ နေတဲ့လိပ်စာရခဲ့ပါတယ် […]
မြန်မာပြည်သူများအတွက် ဝမ်းသာစရာညနေခင်းသတင်းလေးပါ ICJ မှ ထုတ်ပြန် အမိန့်စာ…
မြန်မာပြည်သူများအတွက် ၀မ်းသာစရာညနေခင်းသတင်းလေးပါ ICJ မှ ထုတ်ပြန် အမိန့်စာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တွေအပေါ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားမတွေ့ရဘူးလို့ ရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာအစိုးရ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ သတ်ဖြတ်မှုတွေ၊ အိုးအိမ်စွန့်ခွာရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့တာတွေဟာ မွတ်ဆလင် ဒါမှမဟုတ် တခြားလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတခုကို ဖျက်စီးဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ […]
၁၄ နှဈအရှယျ ကြောငျးသူလေးကို ၁၈ နှဈပွညျ့ရငျလကျထပျမယျလိမျပွီး —-ကငျြ့လာခဲ့တဲ့ ကြူရှငျဆရာ
January 20, 2020 KhitthitMyanmar 0
၁၄ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူလေးကို ၁၈ နှစ်ပြည့်ရင်လက်ထပ်မယ်လိမ်ပြီး —-ကျင့်လာခဲ့တဲ့ ကျူရှင်ဆရာ ဒီအသည်းနာစရာကောင်းတာကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ကျူရှင်ဆရာကတော့ Southern Taiwan ကဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကျောင်းသူလေးကို ၂၈၅ ကြိမ်တိတိလိမ်လည်ပြီး ကာမစက်ယှက်ခဲ့ကြောင်း Worldofbuzz သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ APANNPYAY မှ မျှဝေရေးသားတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Lan အမည်ရှိသူကျောင်းသူလေး […]
နဒှေေး နဲ့ ဖွဈတဲ့ ပွဿနာမှာ အဝတျမဲ့ ပုံတှေ ထှကျပျေါလာတဲ့ ကိစ်စ သံစဉျမောငျရဲ့ ဖခငျ ပွောပွီ
Video ဖိုငျကို အောကျဆုံးမှာတှဲပွီး တငျပေးထားပါတယျ လတျတလောမှာတော့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာတှမှော နဒှေေးနဲ့ ခဈြသူဟောငျးဖွဈတဲ့ သံစဉျမောငျတို့ရဲ့ ကွားက အဖွဈအပကျြတှကေ ပွနျ့နှံ့နပေါတယျ….နဒှေေးက နှိပျစကျထားလို့ဆိုကာ မကျြနှာမှာ ဒဏျရာအပွညျ့နဲ့ သံစဉျမောငျရဲ့ ဓာတျပုံတှလေညျး ပွနျ့နှံ့နသေလို နဒှေေးဘကျက ဖွဆေိုထားတဲ့ အငျတာဗြူးဗီဒီယိုလေးတှဟောလညျး လူကွညျ့မြားနတောပါ….စိတျမကောငျးစရာတဈခုကတော့ သံစဉျမောငျရဲ့ အဖျောအခြှတျပုံတှေ ပွနျ့နှံ့လာတာဖွဈပါတယျ… […]
မန္တလေးကျုံးတွင်းသို့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဝတ်လစ်စလစ်ဖြင့်ခုန်ချ ရုပ်သံ
January 19, 2020 KhitthitMyanmar 0
မန္တလေးကျုံးတွင်းသို့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဝတ်လစ်စလစ်ဖြင့်ခုန်ချ ရုပ်သံ 18.1.2020 နေ့က မန္တလေးမြို့ ကျုံးအတွင်းသို့ အမည်မသိ အမျိုးသမီးခုန်ချခဲ့သည်။ ခုန်ချရာတွင်လည်း ဖော့ကွင်းကိုကိုင်လျှက်ခုန်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ အပေါ်ပိုင်းအဝတ်အစားများလည်း မပါဟုသိရပါသည်။ ပတ်ဝန်ကျင်ကြည့်ရှု့နေသူ အများစုမှတ်ချက်ပေးသည်မှာတော့ ဆေးကြောင်နေသည်ဟု သိရပါသည်။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ခုန်ချခဲ့သည်ကို မသိရပါ။ ရုပ်ရေသနားကမားလေးနဲ့ လို့လည်းပြောကြပါသည်။ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များ အချိန်မှီရောက်ရှိလာပီး ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ […]
ရတနာပုံဈေးမီးလောင်မှုမှာ ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ ညီလေးက ဝန်ထမ်းမဟုတ်လို့ လစာမရပါဘူး
ရတနာပုံဈေးမီးလောငျမှုမှာ ပွုတျကခြဲ့တဲ့ ညီလေးက ဝနျထမျးမဟုတျလို့ လစာမရပါဘူး စတေနာ့ဝနျထမျးသကျသကျ အရနျမီးသတျလေးပါ ၁၇ ရကျနေ့ ည က ကြှနျတျောတို့ မန်တလေးမွို့ ရဲ့ Sky Walk မီးလောငျမှု ဖွဈစဉျမှာရဲဝံ့ စှာ မီးငွိမျးသတျရငျး ပွငျးထနျစှာ ထိခိုကျ ဒဏျရာ ရခဲ့ တဲ့ […]
November 13, 2019 KhitthitMyanmar 0
လူတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဖေးမရမည့်အစား အမြဲတမ်းဝေဖန်တိုက်ခိုက်တတ်သူတွေဖစ်တယ်လို့ ပညာရှင်အချို့ကဆိုပါတယ် … ။ ကိုယ်အသားဖြူရင် အသားမဲသူကိုလှောင်တယ် ၊ ကိုယ်က အရပ်ရှည်ရင် အရပ်ပုသူကိုလှောင်တယ် ၊ ကိုယ်ကချမ်းသာရင် ဆင်းရဲသူကိုလှောင်တယ် …. ။ တစ်ပါးသူရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ဖေးမရမည့်အစား ဖယ်ကျဉ်သွားအောင် တိုက်ခိုက်လေ့ရှိကြပါတယ် …. ။ အားနည်းသူကိုတွေ့ရင် […]
ရနျကုနျမွို့ဆူးလပေနျးခွံမှာ တက်ကဆီယာဉျမောငျး ချေါသှားပွီး ပြောကျနလေို့ ကူညီပေးကွပါရနျ
November 12, 2019 KhitthitMyanmar 0
ရနျကုနျမွို့ဆူးလပေနျးခွံမှာ CCTV ကငျမရာတပျဆငျထားခွငျးရှိမရှိသိလိုပါသညျ။ သိရှိရငျအကွောငျးကွားပေးစလေိုပါသညျ။ အောကျပုံတှငျပါသညျ့ သီလှရှငျ လူထှကျက​လေးမလေးနှဈဦး ပနျးခွံတှငျထိုငျနစေဉျ တက်ကဆီယာဉျမောငျးတဈဦးမှ အလုပျရှာပေးမညျပွောပွီးကလေးမလေးနှဈဦးအား ကားပျေါတငျချေါသှားပွီး အငယျကိုတော့ ဘူတာရုံကွီးသို့ ပို့ဆောငျပေးပွီးအကွီးမကွီးကိုတော့အလုပျရှာပေးမညျဟု (11.11.209)ရကျနကေ့ချေါဆောငျသှားခဲ့ကွောငျးသူ၏ မိဘမြား၏ပွောပွခကျြအရ သိရှိရပါသညျ။ ၎င်းငျးပနျးခွံတှငျCCTV. တတျဆငျထားခွငျးရှိပါက ကလေးမလေးနှဈဦးကိုတငျချေါသှားသညျ့တက်ကဆီအားဖျေါထုပျပေးနိုငျမှာဖွဈသညျ့အတှကျ အကူအညီပေးအကွောငျးကွားပေးစလေိုပါသညျ။ ကလေးမလေးတှကေတော့ကွို့ပငျကောကျကပါ။ တှရှေိ့ခဲ့ရငျလညျးအောကျပါဖုနျးနံပါတျသို့ အကွောငျးကွားပေးစလေိုပါသညျ။ 09 […]